Malunga nathi-i-CBD ezolileyo
Iifama ezinoxolo ziyazingca ngokuba ngumvelisi weemveliso ze-CBD kuphela kwintengiso ezivunyiweyo yi-Food Alliance, umbutho ongenzi nzuzo ubeka umgangatho wase-US wezolimo oluzinzileyo kangangeminyaka engamashumi amabini.
Amafama ethu alandela imigaqo yezolimo engqongqo nebanzi, eqinisekisa ukuba CBD zivela kwiifama ezikhusela indalo, zigcina indalo kwaye zinoxanduva kwezentlalo. Esi siqinisekiso soManyano lokutya sibonisa ukuba ishishini lefama, ihlathi, okanye ukhenketho luphicothwe ngokuchasene nemigangatho engqongqo yokuqinisekiswa efuna amanyathelo afanelekileyo okusingqongileyo, intlalontle noqoqosho oluzinzileyo.
Akumangalisi ukuba iTranquil CBD ingumthombo wokuthanda impilo yabo bawuhoyayo umzimba kunye nehlabathi labo.
Kwi-CBD enoxolo, sikholelwa ukuba umgangatho wethu ophezulu, iimveliso zempilo ezifikelelekayo ezenziwe nge-CBD efumaneka kwi-hemp zibonelela ngezona ndlela zilungileyo zokunyusa impilo kunye nentlalo-ntle yabathengi bethu.
Iimveliso ze-CBD ezolileyo ziveliswa kumgangatho ophezulu, izityalo ze-hemp ezivunyiweyo. Iimveliso zethu azikho-ze-GMO kwaye azinazo i-pesticides, iherbicides, okanye izichumisi zemichiza. Zonke iimveliso zethu ibhetshi ivavanywa ziilebhu zomntu wesithathu kwaye iioyile zethu zikhuselekile ngokupheleleyo ukuba zingasetyenziswa. Ke ukuba ujonga ezona mveliso ze-CBD zibalaseleyo kwintengiso, ungajongi phambili. I-CBD ezolileyo yimpendulo yakho! Vumela iimveliso zethu ezisemgangathweni zibenze lula ubomi bakho.
Umsebenzi wethu kukuzisa iimveliso ze-hemp cannabidiol (CBD) ezikumgangatho ophezulu kwindawo yentengiso. Sisebenza ukufundisa abanye ngezibonelelo zokukhupha i-hemp, kwaye kuyinjongo yethu ukusebenzisa iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu ezizezona zibalaseleyo kushishino ukunceda ukwandisa impilo kunye nentlalontle yabathengi bethu.
I-CBD EFANELEKILEYO NE-HEMP FARMS